Booliska Göteborg oo gacan siinaya Stockholm ka dib dilal soo laa laabtay oo gil gilay magaaladda | Somaliska
Muddo toddobaad guhadood markii labbo lix ruux siyaabo kala duwan loogu dilay magaaladda oo labadii ugu dambeeysay lugu toogtay xaafadda Kista ee magaaladda Stockholm, ayaa booliska gobolka Göteborg shaaca ka qaaday in uu taageero u fidinayo booliska caasimadda oo la daala dhacaya falalka ammaan xumo ee ku soo laa laabtay mudooyinkii ugu dambeeyey magaaladda gaar ahaan xaafadda ay ajaanibta ku badan tahay ee Rinkeby.
Robert Karlsson, oo ah madaxa booliska goboladda Galbeed ayaa sheegay in dhinacooda ay diyaar la yihiin taaageero lugu sugayo amaanka magaaladda.
“Marka la bar bar dhigo koonfurta iyo Stockholm, anaga hadda xaaladeenu waa ka roon tahay, dabcana waxaan ka geeysaneynaa gacan” ayuu yiri Karlsson oo aan sheegin taageerada ay u fidinayaan caasimadda nooca ay u ekaan karto balse tilmaamay in xoojinta ciidanka iyo baaritaanadda la xirriira falal dambiyeedka ay qeyb ka qaadanayaan.
Magaaladda Göteborg oo caasimadda labaad ee Iswiidhan ayaa waxeey sanadii hore aheyd mid aan qudheeda dab yar shidin oo falalka ammaan xummo ee kooxaha falal dambiyeedka ku lug leh gacan ka geeysanayeen, hase ahaatee uu sanadkani ka soo yara hagaagay intii hore marka la bar ba dhigo magaalooyinka Malmö iyo Stockholm.
Magaalooyinka waa weyn ee sida caasimadda ee Stockholm, Göteborg iyo Malmö ayaa mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa falal dil ah oo u dhaxeeya kooxo qaarkood ka ganacsadda maandooriyaha, ku waas oo walaac ku abuuray bulshadda dalka guud ahaan. Ciidammadda amaanka ayaa haatan indhaha si weyn uga haya kooxaha amaan darradda ka wada magaalooyinka.
Dhac loo geeystay maqaayad sanadkii hore lugu weeraray magaaladda Göteborg
Reer baadiyaha iyo reer magaalka yaa ku firfircoon qurbaha?
Websiteyada cunsuriyiinta oo lagu dacweeyay booliska